Ndụmọdụ 7 maka iwulite ikike nchịkwa pụrụ iche | Ọrụ - Nlekọta - ZOE Njem
7 Atụmatụ maka Ịzụlite Nlekọta Nlekọta Nlekọta
Top 10 Linkedin Pages Iji nweta ọrụ na Dubai
Nwere ike 17, 2019
Anonymous Raj Jayamani onye na-eso anyị si Linkedin
Nwere ike 18, 2019
Edere isiokwu ahụ maka ụlọ ọrụ Dubai City Company site Zoe Talent Solution
7 Atụmatụ maka Ịzụlite Nlekọta Nlekọta Ihe Nlekọta Zoe Talent Solution. Ọ bụrụ na ịchọrọ maka nkwalite, lelee otu Usoro nchịkwa maka otu esi zulite nka gi ma welie ohere ị nwere ị rụpụta ezigbo ihe dị ka onye nchịkwa. Nke a bụ otu ị ga - esi mee ya:
1. Chọpụta Ebe Gị
Otu uzo kacha mma iji luso ndi iro agha bu site na ima ihe ha nwere iyi egwu. Nke a pụtara na ọ dị mkpa ịchọ ịchọpụta ihe bụ ọganihu gị rụpụta ihe gbasara ọrụ gị yana kwa agwa agwa na mmetu uche gi. Nke a bụ nzọụkwụ mbụ na-arụ ọrụ na-emezighị emezi ndị a na na-achọta usoro dị irè iji kpochapu ha kpamkpam.
Ngwá ọrụ dị ukwuu maka nke a bụ nzaghachi onwe onye, ​​na-ekwukarị, nke mejupụtara usoro mmụta onwe onye. Ọzọkwa, ajụjụ ndị na-enyere aka ịtụgharị uche na nsonaazụ gị mata ihe na-emebi oganihu gị. Site na ime nyocha a, ị ga - aghọta nke ọma ebe ịkwesịrị imeziwanye na imepe ihe iji lebara ha anya.
2. Mara Amaokwu Gị
Are bụ ike gị n'ezie ma nwee ọtụtụ ikike na ike nke na-ekewapụ gị iche na ndị ọzọ. Ana m ekwu maka ike gị, àgwà ndị ahụ na akụkụ ndị pụtara ìhè na ha Omume gị yana nsonaazụ ọkachamara gị. Yabụ, ị maralarị ihe ihe ndị a dị iche ?. Know ma ebe ino na nma? Eleghi anya ị nọ na teknuzu, na mkpebi ma ọ bụ na nkwukọrịta ma ọ bụ na ọrụ mmekọrịta.
Choputa ebe ihe di iche na gini bu ikike ikwusi ike ma gha aru oru ike kwa ụbọchị. Jiri ohere gị dị na ụlọ ọrụ ahụ wee tinye n'ọrụ ihe omuma gi igbanwe ma kpokota ihe bara uru ma mekwa ka imara mara ihe oge niile.
3.Invest na Ọzụzụ
Worldwa na ụlọ ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa. N'echiche a, o nwere ike ịbụ na ihe ị mutara afọ ise ma ọ bụ iri gara aga abụrụla nke onye mgbe ochie na nke ugbua. Ya mere, itinye ego na ọzụzụ, ikike nchịkwa, ọgụgụ, ihe ọmụma, na netwọk na nghagha a na-aga n’ihu di nkpa ka ulo oru ndi a, nke ego na oge, nyere gi aka iwulite ikike na ikike ohuru ma tinyekwa uche gi n’ihe gbasara oru gi na ahia gi na echiche uwa.
4.Bild a Good Relationships Relationship
Nke a, dị ka m kwuru, bụ n'ime ikike mmadụ dị mkpa maka ọkachamara ọ bụla ma ọ bụ na njikwa ma ọ bụ mpaghara ọ bụla ọzọ, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ nwere obere oge na-eso ndị ọzọ na-arụ ọrụ ya, ịdị mma nke mmekọrịta ya na-eme ka ihe niile dị na ụdị mmekọrịta ha.
N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa ka ị chọọ ịkwụsị mmachi nkwenkwe ndị mmadụ gbasara ndị mmadụ ma zere imebi ihe na omume ọjọọ dịka enweghị ntụkwasị obi, enweghị obi ike, mkparị, na asịrị na gburugburu ebe ọrụ gị. Nke a dị gị mkpa iji wee nwekwuo ezi mmekọrịta na ndụ gị kwa ụbọchị, ka ị nwee ike ịkọrọ ndị ọrụ ibe gị, ndị ahịa gị, na ndị isi gị nke ọma ma nweta nkwado na ntụkwasị obi ibe gị.
N'echiche a, site na 0 rue 10, kedu ọkwa give n’enye gi otu oru nmekorita gi n’ebe oru taa?. Na-atụgharị uche na mmekọrịta gị na ndị ọzọ, chee echiche gbasara ebe ị ga - emesi kwalite; jụọ maka nzaghachi n'aka ndị isi gị ma ọ bụ ezigbo ndị ọrụ ibe gị ma na-agbasi mbọ ike mgbe niile igbanwe na mpaghara a.
5.Hụlite Ọhụụ Ọhụụ
Mgbe ị zụlitere ike ịhụ ihe dị anya ma hụ ihe onye ọzọ na-ahụ, ohere ị nwere iji ohere kachasị na iwepu iyi egwu dị ọsọ ọsọ. Maka nke a, essentialzụlite ọhụụ atụmatụ gị dị mkpa, n'ihi na nke a bụ ikike na-eme ka ị na-agbasapụ ọhụụ gị banyere ụlọ ọrụ, ahịa na ndị mmadụ, na-eme mkpebi ndị amamihe karịa ma na-emekọ ihe ọnụ.
Maka nke a, ọ dị mkpa mgbe niile na kọntaktị ya na ndi okacha mara na mpaghara gi ma n’ebe di iche. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, toa ntị na akụkọ, ahịa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, teknụzụ na mgbanwe ụwa. Ihe ndị a niile na - enyere aka ịbawanye ihe ọmụma gị weta echiche ohuru na ohere n’ọrụ gị na ụlọ ọrụ gị.
6.Pụgharịa Nkwurịta Okwu Gị
Inwe ezi mkparịta ụka bụ ihe di nkpa n’ebe omuma aka nke ndi oru nlezi-anya yana mpaghara niile. Ka ede ya, ma ya bụ nke ọnụ, ma ọ bụ nke anụ ahụ. Yabụ, n'akụkụ dị mma, ụzọ anyị si agwa anyị okwu na-agwa anyị ọtụtụ ihe gbasara mmekọrịta anyị na ibe anyị, otu anyị si eche echiche, mmetụta anyị, na omume anyị, yana nsonaazụ anyị nwetara.
Yabụ, na ị ga-aghọọ onye ọzọ ga na-ekwukarị okwu nke ọma, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ndị nnọchianya nke ọrụ; nzaghachi nzaghachi, usoro mkparita uka ya na ndi ahia ya na ndi n’enye ha; Nghọta ndị otu nọ na oge imekọ ihe ọnụ, mgbanwe nke ahụmihe na ihe omuma na ndi oru, ozi ahụ zitere ma gbanwere site na ozi ịntanetị na akụkọ na mkparịta ụka nke onye ọzọ.
So ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkparịta ụka nke ọma na iji nkwenye, bido site na ịtụle okwu ị na-eji; ụda olu gị mgbe ị na-ekwu okwu banyere mmadụ ma ọ bụ na-ekwu maka otu isiokwu ma nyochaa ma ọnọdụ a na - enyere aka ma ọ bụ na - egbochi ihe ọ ghọtara. Ọ bụrụ otu a, chọọ imezigharị ma mee ka ụzụ gị na ọrụ gị dịkwuo elu ma jiri nke gị nkwurịta okwu nwekwuo nghọta.
7. Bụrụ Onye Nchịkwa ma Boo Nsonaazụ Gị
Nabata bu otu n’ime nkwuputa obi oma ndi mmadu n’uwa nile n’ihi na ka ino kwadoo mmadu na mmepe aka oru ha ma ọ bụ n’otuto ha, ị nwekwara ohere ịmụ, tolite ma gbasa ahụmịhe ha na ya. Yabụ, na mgbakwunye na mmụta iji zụlite ma na-eme ngwangwa nsonaazụ nke ndị ọzọ, dịka onye nkuzi gị mụta otu esi ebuli ọganiihu gị.
N'echiche a, onye na-ahụ maka njikwa nwere ike iji abamuru nke nkuzi nkuzi iji bulie ọrụ ya na ụlọ ọrụ, melite nkwukọrịta ya, nzaghachi ya, mmekọrịta ya na ndị ọzọ, ikike ịhazi na ijikwa oge, yana iji bulie ikike ọgụgụ isi ya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya. na usoro.
Bụrụ onye nchịkwa
Uzoa bu uzo abuo: nke mbu bu ohere iji zuta onwe gi ma mee dika onye nkuzi n’ime, n’inweta ike ma omenaala nkuzi n’ime ụlọ ọrụ gị na ndị ọrụ gị so na ya. Nke ozo bu igbakwunye ihe omuma gi banyere njikwa ya na mmuta ya ma mee ihe aka gi ọrụ, na-enyere ma na-akwado ndị ọkachamara, ndị isi na òtù dị iche iche na mbido ha na arụmọrụ yana osooso iru ebumnuche ha na ebumnuche ha.
Hụ otu enwere ike isi zụlite ma nụchaa nkà onye nchịkwa ?. Atụrụ m anya na ndụmọdụ ndị a dị n’elu nyere gị aka imebawanye uche gị n'ihe metụtara ike gị yana nke nwere ike rụọ ọrụ maka nrụpụta ọrụ gị ma nyekwa aka na nka na nka na nka nọgidere na-etinye ego n'ọrụ ọkachamara na nke onwe gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ imezigharị ihe ịga nke ọma gị, cheta na ịzụ ịzụ bụ ebe a iji kwado gị iji rụpụta nsonaazụ gị pụrụ iche.
Zoe Talent Solutions - Inye Ike Ndụ
E si n'okwu Grik maka ndụ wee zụta Zoe, nke a sitere na azụmahịa ZOE Talent Solutions iji nyere ndị ahịa aka ibi ndụ nwere afọ ojuju. N'ihe karịrị ndị na-ahụ maka 40 na ihe karịrị asụsụ 20, ZOE nwere ụlọ ọrụ na mba anọ ma nye ndị ahịa ọzụzụ n'ụwa niile. na mpaghara onwe, nke ndị ọha na eze na nke ọha. Ezubere otu a na ZOE iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnata ndị otu kwesịrị ekwesị na ahụmịhe dabara adaba nka n’ebe nile n’uwa.
Iji ghọta nke ọma ndị ahịa ọ bụla, ọnọdụ siri ike na gburugburu ya na gburugburu ebe obibi, a na-etinye mgbado anya na ZOE oge niile ihe omuma banyere ihe omuma, na-agba mbọ hụ na a na-amụ ahịa, ihe na-eme na omume kachasị mma na ihe omuma a na-adị. Nke a ga - enyere ndị na - azụ ọzụzụ aka iru Ọhụụ na ozi Nke ZOE kwupụtara.
Ikwado ndi otu di iche-iche site na isi obodo ha, site n’inye ha nkuzi nke oma na-ahụ maka ngwọta ahaziri ha iji nyere ha aka nweta ọmarịcha ahịa ha.
Iji nyere ndị ahịa anyị aka na usoro nchịkwa talent nke ga-ebuli arụmọrụ nke ndị ha iji nweta oganihu n’otu n’otu na ndi otu ha.
Enwere ike inye ọzụzụ dị ka ụbọchị emepere emepe, ọzụzụ n'ime ụlọ na ịLụta ihe. A na-enyefe ya otutu uzo iji me ka uru ha di elu. Dị ka Aristotle kwuru n'otu oge, "Maka ihe anyị ga-amụ tupu anyị enwee ike ime ha, anyị na-amụta ya site n'ime ha."
Ghọrọ onye ọzọ
Ngosiputa, vidiyo na vidiyo
Nnyocha nyocha nke ikpe
Citylọ ọrụ Dubai City, na-ekwu okwu n'ozuzu ha, na-enye aka na ndụmọdụ. Ọzọkwa, ezigbo ntuziaka maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.